ngomphathi ku 20-08-04
I-Rotational Molding (i-BrE udini) ibandakanya ukungunda okufudumeleyo okuzele kukugcwalisa okanye ukutola ubunzima bezinto eziphathekayo. Emva koko ijikelezwa kancinci (ihlala ijikeleze ii-axes ezijikelezileyo) ibangela ukuba izinto ezithambileyo zisasazeke kwaye zinamathele kwiindonga zesikhunta. Ukuze kugcinwe nokuba ...
Inzuzo Rotational Ukubumbela:
1) Iindleko zezixhobo zoqoqosho. 2) Ukwakhiwa kwesiqwenga esinye. 3) Ukunciphisa ubunzima-xa kuthelekiswa nesinyithi. I-4) Ubungqingqwa obunobumba obulinganayo bokungqengqa kwiindawo ezigqithileyo. 5) Ukutyeba kunokuhluka xa kufuneka 6) Ukwahluka kokugqitywa kunye nombala. 7) Ukukwazi ukuvelisa ukubumba kweendonga ezininzi. 8) Uyilo oluguquguqukayo ...
Izinto eziluncedo zeemveliso eqengqelekayo kunye neemveliso inaliti
Ngalo lonke ixesha kwinkqubo yokubumba inaliti, izinto zongezwa ngokuthe ngqo ekubumbeni, okwenza ukuba zonke izinto zingene kwimveliso kwaye zikhuphe ekubumbeni, emva koko zongeze izinto ezifunekayo kwinkqubo elandelayo yokubumba. Xa sifuna ukutshintsha umbala wemveliso, asizukuchitha nayiphi na ...